Ezentengiselwano ezingabizi kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi losayizi | Martech Zone
Imishini Yokumaketha Engabizi kakhulu Yanoma yiliphi Ibhizinisi Losayizi
ISonto, May 22, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 2, 2013 Douglas Karr
Marketing Automation igama elinikezwe amapulatifomu esoftware enzelwe iminyango yezentengiso nezinhlangano ukwenza lula izinqubo ngokwenza imisebenzi ephindaphindwayo. Omunye waleyo misebenzi yikhono lokukhomba isivakashi esizeni sakho, uthwebule imininingwane yabo, futhi wakhe isu lokuxhumana eliqhubekayo nabo… kufezwe ngezinsizakusebenza ezincane noma cha ngokusebenzisa i-automation.
Ngokusho the Aberdeen iqembu, izinkampani ezisebenzisa izinhlelo ezizisebenzisayo zokumaketha:
Yiba nesilinganiso sokuguqulwa esingcono se-107%.
Yiba nama-40% wesilinganiso sesilinganiso esikhulu.
Yiba ne-20% yokuthola iqembu eliphakeme lesilinganiso.
Thola ukunemba okungcono kwesibikezelo okungu-17%.
Kuze kube manje, ukwenziwa kokumaketha okuzenzekelayo bekubanzima kakhulu noma kubiza kakhulu ukuthi inkampani emaphakathi ingakusebenzisa. Lokhu kuyashintsha. I-Act-On iyinhlobo entsha yesoftware yokuthengisa ezenzekelayo eyakhelwe ukusebenzisa ezinkampanini ezincane kakhulu, noma ezinkulu kakhulu. Ngamanani lokho ~ $ 500 ngenyanga (ngaphandle kwezinkontileka zesikhathi eside)… futhi kuyabiza kakhulu ukusebenzisa lesi sixazululo esibanzi.
Ukuze baphumelele namuhla, abathengisi kudingeka baqondise kabusha indlela yabo eyisisekelo kusuka ekuvezeni amanani amaningi emikhombandlela ukuze bahlanganyele ngokuqinile nabathengisi ukushayela imali, ”kubika uRaghu Raghavan, umsunguli kanye ne-CEO ye-Act-On. “Inhlanganisela ye-Act-On yokuba lula namandla inikeza leso sixhumanisi esilahlekile emakethe phakathi kwezixazululo zamaphoyinti angafani njenge-imeyili newebhu analytics amapulatifomu, futhi ngaphezulu okuyinkimbinkimbi ngokweqile okuphethe amapulatifomu wokumaketha.
I-Act-On Software inethoni yezinketho ezicebile… konke kutholakala kungxenyekazi eyodwa:
Ukumaketha nge-imeyili ngokuphathwa kohlu nemikhankaso yokuthengisa econsayo
Amafomu wewebhu namakhasi okufika
Ukuhlanganiswa kokuqukethwe kwamabhizinisi
Ukuqapha izivakashi zewebhusayithi
I-Webinar nokuphathwa kwemicimbi (ngokuhlanganiswa neWebEx)
Ukuhlanganiswa kweCRM (ngokuhlanganiswa okuhlanganisiwe kwe-Salesforce)
Imithombo yezokuxhumana yezokuxhumana namathuluzi wokuhlola
Ukuqagela okulindelekile, ukuhlukaniswa kwamabanga, iziqu, ukushaya amagoli nokuhlaziya
I-Act-On futhi ikunikeza ngemenenja yokusekela ezinikele ngaphandle kwezindleko ezengeziwe! Lokhu ngokuvamile kuyi-upsell yabanye abathengisi bokuzenzakalela bokumaketha. Ukuhlanganiswa okuqinile kuka-Act-On nge Webex, Jigsaw futhi Salesforce inganikeza imizamo yakho yokumaketha ngendlela ephelele - kusuka kulokho okulindelwe, kuya ekhasini lokufika, kudemo, ukukhulisa, ukuhola isizukulwane, ukuvala… ngaphandle kokushiya isoftware. Lokho impela uhlelo oluqinile.
Tags: Ukuhlolwa Komkhiqizoibhukumaka yomphakathi
Imibhalo Yesifundo Se-imeyili Amagama adala izihlungi zogaxekile
I-SMMS: Izinhlelo Zokulawulwa Kwemidiya Yezenhlalo
May 23, 2011 ku-1: 00 PM
Sawubona Douglas, ungamqhathanisa kanjani i-Act-On neHubSpot? Ingabe yisixazululo se-SAAS noma udinga ukuyifaka kuseva yakho yeWebhu? Uma kuyi-SAAS, kukhona imicabango mayelana nokuhlinzekwa kwamakhasimende?
Okuhle kakhulu, uJohn McTigue
May 23, 2011 ku-3: 19 PM
Lokhu kuqine kakhulu kuneHubspot. Angicabangi ngeHubspot njengeplatifomu yokumaketha ezenzakalelayo njengokufaka kwezentengiso okungaphakathi. Ngingacisha - kepha angicabangi ukuthi i-CRM, imikhankaso ye-drip, njll iyingxenye yohlelo lokusebenza lwe-Hubspot.
May 23, 2011 ku-3: 27 PM
I-HubSpot inayo ukuhola kokukhulisa (i-drip) nokuhola ukuhlanganiswa kwe-API ne-Salesforce namanye ama-CRM's, ukwakhiwa kwamakhasi okufika nokwenza kahle, amathuluzi we-SEO (noma ngabe awakudala), i-CMS yewebhusayithi kanye nenjini ye-blog ehlanganisiwe. Lokho kubonakala kufana ne-automation suite yokuthengisa ezenzakalelayo ebanzi kimi. Baze babe nokuthengisa nge-imeyili okwakhelwe ngaphakathi.
Okuhamba phambili, uJohn
May 23, 2011 ku-9: 43 PM
Ngiwazi amathuluzi womabili; empeleni kwehla kulokho ozama ukukwenza - ukugxila ikakhulu kokungenayo, bese i-hubspot ingakufanele ukubheka, noma okungenani ithuluzi labo le-'mahhala 'le-seo; uma kugxilwe ekutholeni impumelelo engcono kuyo yomibili imikhankaso ephumayo kanye / engenayo nokwenza kube lula ukuphatha yonke imikhankaso yakho namathuluzi ndawonye - njenge-webex, salesforce.com, i-jigsaw nokuningi, bese u-Act-on mhlawumbe ulingane kangcono. Ikakhulukazi unikezwe ukuthi kulula kanjani i-Act-On ukwethula / ukusebenzisa nokugxila kwabo ekuhanjisweni kwe-imeyili.
May 27, 2011 ku-6: 03 AM
Isizukulwane sesoftware noma uhlelo lokuhweba, Ngazi kanjani ukuthi ngithola inani elingcono kakhulu lesoftware / uhlelo.
May 27, 2011 ku-4: 34 PM
I-iPhone App Marketing
UJun 1, 2011 ngo-3: 57 AM
Lokhu kungenye yamabhulogi amahle engiwafundile namuhla. Isayithi lakho liqukethe imininingwane eminingi emihle futhi ngiyaqiniseka ukuthi abantu abaningi bazoyithanda njengoba ngenza. Ngingathanda ukunikeza leli sayithi isilinganiso sesithupha. Qhubekani nemisebenzi emihle bafana. Ngicabanga ukuthi ngizobuya kuleli sayithi njalo. Ngiyabonga.